ma ka beddeli karaa Radio (NAV1) on Air France Airbus 380
Su'aal ma ka beddeli karaa Radio (NAV1) on Air France Airbus 380
1 sano 11 bilood ka hor #442 by spilok
Waxaan isku dayay in wax walba, laakiinse anigu uma aan ka bedeli kartaa inta jeer ee ku Air France Airbus 1 radio (NAV380). Waxaan jeclaan diyaarada laakiin waa waxtar ii haddii aanan bedeli kartaa mawjadaha raadiyaha.
Waa maxay waxa qarsoon? Fadlan caawiyo.
1 sano 11 bilood ka hor #443 by Dariussssss
Isla halkan ... ahaantii, dhammaan PA A380s qabto dhibaato in.
Waxaa laga yaabaa in, haddii ay jiraan waa hab lagu bedelo radio in ama wax kasta oo ay tahay, iyadoo mid ka Boeing oo kaa caawin lahaa, laakiin uma malaynayo inay suurta gal. Waxaan xusuustaa, in FS2004 in suurto gal ahayd.
1 sano 11 bilood ka hor #444 by Dariussssss
Waxaan ahaa awoodaan si ay u hagaajin. All aad u baahan tahay waa in aad A321 default.
folder Panel furan,
raadiyo iyo furi file panel.cfg,
nuqul khadadka soo socda:
booska = 8
muuqda = 0
(Xaqa ah kuwa midabka), ma koobi in Window01, waxaa furka kartaa ilaa aad guddi A380.
Orod oo waxaad tagtaa A380,
Panel.cfg file furan,
raadiyo iyo bedelo oo dhan khadadka ee Radio.
Imtixaanka dhowr daqiiqo go a, oo wuxuu ka dhigay caga qurux badan.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: spilok, Gh0stRider203, geniousabhishe1
1 sano 11 bilood ka hor #445 by Gh0stRider203
Waa in aadan ku helay qoraal ah ayay u soo diray ....
Idaacadaha on Airbus waa feature ah optional. Kinda sida blinkers on BMW ah
1 sano 11 bilood ka hor #446 by Dariussssss
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.236